Toddobada Caado Ee Dadka Ugu Saamaynta Badan | Vol: 01 – Cad: 94aad – Indheergarad
HomeGorfaynSookoobidToddobada Caado Ee Dadka Ugu Saamaynta Badan | Vol: 01 – Cad: 94aad
May 8, 2021 Maamulka Indheergarad Sookoobid 0
Indheergarad – Meey 08, 2021 – Sooroga – Vol: 01 – Cadadka: 94aad
Stephen R. Covey (Oktoobar 24, 1932 – Julaay 16, 2012) oo ahaa qoraa ku xeeldheer horumarinta iyo weliba dhiirigalinta nafta, hoggaamiye iyo nin arrimaha qoraalka ku soo dhex jiray muddo badan. Waxa kale oo qoraagu ahaa la-taliye ganacsi. Buuggiisani waxa uu ka mid noqday buugaagta loogu iibsiga badan yahay daafaha dunida. Waxaana la iibsaday in ka badan 30 Million oo xabo tan iyo daabacaddii kowaad oo ku beeganayd 1989-kii. sidoo kale lagu turjumay 37 luuqadood. Buuggani waxa uu ka mid yahay buugaagta caawiya nafta iyo shaqsiyaddaba. Buuggan ‘The Seven Habits of Highly Effective People/ Toddobada Caado ee dadka ugu saamaynta badan’ waxa uu ka hadlayaa sida ku cad ciwaanka ama magaca buugga toddobo caado oo ay gaarka u leeyihiin dadka ugu kartida–saamaynta badan. Sannadkii 1996, majaladda ‘Time’ ayaa Stephen u magacowday mid ka mid ah 25-ka qof ee ugu saameynta badan. sidoo kale wuxu ahaa borofaysar ka tirsan jaamacadda gobolka Utah, iskoolka ganacsiga ee Jon M. Huntsman.
Ka hor, intaan la bilaabin ka shaqaynta toddobada caado ee dadka ugu kartida badan, waxa uu qoraagu inoo soo jeedinayaa labo qaab oo isbeddel fiican leh. kuwaasi oo kor u qaaadi doona qiimaha ama waxtarka aan ka heli doonto buuggani.
Mida koowaad, waxa uu ku talinayaa in aan buuggani kaliya loo arkin uun buug, taasi oo la macno ah in uu yahay mid la akhriyo mar kaliya kaddibna lagu rido sanduuqa buugta la isaga kaydiyo. Waxa aan doorbidi karnaa inaan mar kaliya buugga u akhrino si wanaagsan oo dareen leh. Laakiin buuggani waxaa loogu talo galay in uu wehel u noqdo geedi-socodka joogtada ah ee isbeddelka iyo koritaanka nolosha. Waxa uu inoo sheegayaa qoraagu in buuggani loo nidaamiyay si isdaba-joog ah, weliba in uu dhammaadka caado kasta uu soojeedinayo talooyin ku saabsan ku dhaqanka caado kasta si aan wax uga barano caado kasta; diiradana aan saarto caado kasta si gaar ah.
Mida labaad, waxa uu qoraagu soojeedinayaa inaan qaadanno qaab tusaale fiican u noqon kara ku lug-lahaanshaha dhiganahani laga bilaabo ardaynimo illaa iyo tan macallinimo, adiga oo isticmaalaya qaab aad buugga dareenkiisa gudaha u galaysid oo u akhriyaya adiga oo niyada ku haya inaad la wadaagtid ama kala xaajootid wixii aad ka baratay buuggani dad kale muddo dhan laba cisho. haddaba, doddobada qodob ee buuggu ka hadlayo haddii sookoobno waxay kala yihiin:
1. Qabo Hoggaanka/Be Proactive
Ta koowaad ee dadka kartida badan ama guulaystay in ay yihiin dad iyagu aan cidna ku tiirsanayn oo u madaxbannaana hawlahooga. Waxa qoraagu inoo sheegayaa in hawlaha iyo waxa aad samaynaysid iyo geedi-socodka noloshaadu ayna noqon mid ku socota ama waxa ay kuu meerinayso duruufaha dadka kale. Waxa kale oo uu qoraagu inoo tilmaamayaa in aynaan noqon mid u nool in ay noloshiisu ku dhisan tahay in uu shay kasta ka felceliyo ama uu ka jawaabo wax kasta oo agtiisa ka dhacaya. Waxa uu qoraagu inoo tilmaamayaa in aad hoggaanka u qabatid noloshaada iyo umuurahaaga oo aanad ku tiirsanaan cid kale. Waxa uu inooga digayaa in uu qof kale hoggaanka kuu qabto. Caadadani koowaad wax ay ku dhisan tahay kartida iyo doorashada, in aad dooran kartid wax kasta oo aad rabtid. Muhiimada ugu weyn ee caadadani waa inaad adigu gacanta ku qabatid hawl kasta iyo weliba hoggaanka noloshaada oo aanad cidna ku tiirsanaan.
2. Biloow adiga oo isha ku haya gunaanadka dambe/Begin with the End in Mind.
Qoraagu caadadani waxa uu ku magacaabay hoggaanka shaqsiga. Taasi oo macnaheeedu yahay inaad naftaada ku hoggaamiso waxa aad hiigsanaysid noloshaada. Waxa uu ina leeyahay qoraagu in aan isha ku hayno dhammaadka wax kasta oo aan qabsanayno. Caadadani waxay inaga caawinaysaa in aynaan ka leexanin dariiqa hawsha aan xilligaasi ku guda jirno inoona caddaato waxa aan hiigsanayno. Hawsha aan xilligaasi ku jirno ayaa noqon karta waxbarsho, shaqo cusub, qorida buug cusub, ganacsi iyo hawl kasta oo ka mid ah geedi-socodka nolosha. Muhiimada caadadani ayaa ah in ay ina kaafinayso in aan isha ku hayno ujeedka aan ka leenahay hawshaasi illaa aan ka xaqiinayno waxa aan bilownay.
3. Hawlaha Muhiimka ah u hor mari/ Put First Things First
Nolosheena caadiga ah ee maalinlaha ah waxaa ina soo mara hawlo kala duwan oo wata duruufahooda iyo kala mudnaantooda. Caadadani saddexaad waa mid ina faraysa sidii aan u kala horraysiin lahayn hawlahaasi. Caadadani wuxuu qoraagu ku magacaabay caadada maaraynta qofka. Tii kowaad waxay ahayd hoggaaminta, tii labaadna waxay ahayd maaraynta hawlaha kuu yaalla. Haddaba caadadani waxay qofka ka caawinaysaa in uu qofku qaab nidaamsan noloshiisa u maareeyo.
Dhallinteennu waxay maanta inta badan ka cabanayaan garashada ama kala horaysiinta hawlaha ay qabanayaan. Waxaad arkaysaa dhallinyaro bilaabaya waxbarasho ama ganacsi cusub oo haddana markiiba dhexda uga tegaya iyaga oo aan gaadhin yoolkii ay ka lahaayeen hawshaasi.
4. U fikir qaab dadka waxtar u leh/ Think Win-win
Waxaa tahay qof la nool bulsho badan kuwaasi oo aad la leedahay xidhiidho kala duwan. Waxaad la nooshahay qoyskaaga, asxaabtaada, dadka aad isku shaqada tihiin iyo kuwa kale oo kala dhaqan iyo sinjiyad tihiin. Haddaba, waxaa laga maarmaan ah in aad dadkaasi oo dhan aad ula noolaatid qaab faa’iido iyo waxtarba u leh. Ficilkaaga iyo fikirkaaguba waa in uu ahaadaa mid anfacaya dadka. waa inaad ahaataa mid faa’iido u leh qoyskaaga, qaaraabada iyo qarankaba.
Inta aad dunidani ku nooshay ee wadku ku haleelin waa in aad ahaataa mid wax uun laga dhaxlo. Tusaale haddii aad tahay macallin dugsi amma jaamacadeed waa in aad ahaataa mid markasta u fikira sidii u wax tayo leh ugu gudbin lahaa ardaydiisa isla markaana u soo saari lahaa arday dhankasta ka dhisan. Keliya ma aha inaad ka fikirtid gudashada waajibkaaga ah in aad xiisadaada aad u gashid oo saacado kadib iska soo baxdid adiga oo wax waxtar leh u sheegin ardaydaada. U sheeg ardaydaada wax idin wada anfacaaya.
Qoraagu wuxuu inoo sheegayaa in ay jiraan dad u fikiraya si ay u guulaystaan si uu qof kale u khasaaro. Kuwaasi oo nolosha u arka tartan. Taasina ma aha mid wanaagsan. Qoraagu waxa uu inoo sheegaya xeerka loo yaqaano ‘WIN-WIN SOLUTION’ oo ah xeer ogolaanaya in aad adigu guulaystid qofka kalena aad guushiisa ku garab istaagtid.
5. Dadka Fahan si laguu Fahmo/ Seek First to Understand, then to be Understood
Caadadani shanaad waa caado aad u wanaagsan. Waxa uu qoraagu leeyahay dhakhtarku inta uuna bukaanka daawayn wuu waraystaa oo baadhaa xaaladiisa si uu wax uga ogaado xanuunkiisa kaddibna uu u siiyo dawada ku habboon. Waxa kale oo uu ina leeyahay si aad u heshid xidhiidh wanaagsan isku day in aad dadka fahantid adiga oo si fiican u dhagaysanaya, marka uu qofku hadlayo ha na ka dhexgalin hadalkiisa, qiimo wayna u yeel qofka aad la hadlaysid noocuu doono ha ahaadee. Waxa kale oo uu intaasi raacinayaa arrinkani in uuna ka dhignayn in Aanad la imaanin dhiiranaan cad markaan dareenkeenna cabirayno, waana in aan si toosa u sheegno waxa qalbigeena ku jira.
6. Garabso dadka(Wada shaqaynta dadka) / Synergize
Caadadani lixaad waa mid ku dhisan wada shaqaynta dadka iyo in aad abuurtid wada shaqaynta ka dhaxaysa dadka aad la nooshahay. Si kasta oo shaqadaada iyo xirfadaada ugu fiican tahay haddana kama maarmi kartid in aad garabsatid dadkaaga. Si aad u guulaysato waa inaad dadka garab siisaa, adiguna tus in aad ka maarmin. Markaad dadka tustid in aad dhankooda oo aad u baahan tahay taladooda iyaguna waxay kugu biirinayaan fikirro wanaagsan iyo nasteexooyin badan. Isku day in aad weligaa noqonin mid madaxa taaga oo ka maarma dadka mana jiro qof keligii isku filan.
Caadadani waa inaad dadka garabsatid oo aanad isku halayn awoodahaaga.
7. Ahow mindi soofaysan/Sharpen the Saw
Waxa uu qoraagu inoo sheegayaa in aad ahaatid middi soofaysan si aad u hirgalisid caadooyinkaa lixda ah ee kor ku xusan. Caado kasta oo ka mid ah toddobadaasi caado waxay ku dhisnaayeen waxyaabo kala duwan oo kala imanaya awooda shaqsiga, qaabka maaraynta iyo wada shaqaynta dadka. Haddaba si dhammaan loogu dhaqmo oo weliba loo joogteeyo waa in uu qofka diyaar u ahaadaa waxkasta oo ay tilmaamayeen caadooyinkaasi.
Sawirka Kore: Stephen Richards Covey.